लकडाउनमै नौबिसे-नागढुंगा र गौशाला-चाबहिल खण्ड मर्मत गर्ने तयारी ! «
लकडाउनमै नौबिसे-नागढुंगा र गौशाला-चाबहिल खण्ड मर्मत गर्ने तयारी !
Published : 15 April, 2020 7:26 pm
सडक विभागले लकडाउनकै अवधिमा आवश्यक सतर्कता अपनाएर त्रिभुवन राजपथको नौबिसे-पीपलमोड (नागढुंगा) सडक खण्डको मर्मत गर्ने तयारी गरेको छ । लकडाउनमा सडक खाली भएको मौका पारेर यो सडकखण्ड सुधारको काम गर्न प्रयास भइरहेको महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । अहिले काम गर्न सकिए गाडी रोक्नुनपर्ने र यात्रुले सास्ती पाउने अवस्था पनि नहुने उनको भनाइ छ ।
यो सडकखण्ड प्रत्येक वर्षामा खाल्डाका कारण क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ । त्यसैले लकडाउनको समयमै काम गर्न अनुमति मागिएको विभागले बताएको छ । काठमाडौं सडक डिभिजनले हेर्ने नागढुंगाको चेकपोष्टदेखि पिपलमोडसम्मको सडक मर्मतको काम भने भईसकेको छ । चितवन सडक डिभिजनको जिम्मा रहेको यो खण्डमा अस्फाल्ट पिच गर्न चितवनको जुगेडीबाट कालोपत्रे तयार गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो काम अघि बढाउन विभागलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिईसकेको छ ।
यो समयमा सडक खाली भएकाले गाडी नरोकी काम गर्न सकिने भएकाले अनुमति मागिएको विभागका महानिर्देशक शर्माले बताए । विभागले लकडाउनको अवधिमा चावहिल गौशाला खण्ड पनि सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पनि विभागलाई सरकारको सहमति छ ।
गौशाला-चावहिल सडक खण्डमा खानेपानीको पाइप फुट्ने समस्या भए पनि नयाँ पाइप फेर्ने काम सकेर अहिले पिचको तयारी भइरहेको छ ।
‘दुबै आयोजनामा कसरी काम गर्ने भनेर दुबै आयोजनाका निर्माण कम्पनीले तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले कति गाडी, मेसिन र श्रमिक कसरी परिचालन गर्ने भनेर कार्यायोजना तयार गर्दैछन्,’ उनले भने,’त्यसलगत्तै हामी यी आयोजनाहरुमा काम थाल्छौं ।’
भारतीय कामदार घर फर्किर्एकाले नागढुंगाको सडक मर्मतको काम गर्न भने सहज हुने देखिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक प्रवन्ध गरिरहेको जानकारी विभागलाई गराएको छ । कामदारहरुबीच दूरी कायम हुने गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाएर काम हुने शर्माले बताए ।सरकारले अहिले लकडाउनमा बनाउन लागेको चाबहिल-गौशाला खण्ड खाल्डामय छ । खानेपनीको पाइप फुटिरहने समस्याले यो खण्ड जति मर्मत गर्दा पनि स्तरीय नबनेपछि विभाग हैरान थियो ।
यसपटक भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय -पीआईडी)सँग समन्वय गरेर पाइप बिछ्याउने र सडक मर्मत गर्ने कामका लागि एउटै ठेकेदार परिचालन गरिएको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यो खण्ड मर्मतको जिम्मा पाएको छ ।
गत वर्षसम्म सडक विभागले महिनौंदेखि बिग्रेको सडक पनि ठूलो दबावपछि बल्लतल्ल बनाउँथ्यो । तर, यसवर्ष हिउँदबाटै सडक मर्मतको काम भइरहेको थियो । विभागले लकडाउनका समयमा कम कामदार प्रयोग हुने खण्डमा काम जारी गरेको छ भने पुलको काम पनि गरिरहेको छ ।